Global Voices teny Malagasy » Indonezia: Fankalazana Ny Taombaovao Shinoa Tany Jakarta · Global Voices teny Malagasy » Print
Indonezia: Fankalazana Ny Taombaovao Shinoa Tany Jakarta
Voadika ny 13 Febroary 2018 2:26 GMT 1	 · Mpanoratra Martin Manurung Nandika (fr) i Boukary Konaté, Liva Andriamanantena
Sokajy: Indonezia, Fivavahana, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Politika, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
(Tamin'ny 26 Janoary 2009 no nivoaka ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nandritra ny 30 taona mahery, voarara hoan'ny Shinoa tany Indonezia ny fanehoana ny kolontsainy. Nambaran'ny fitondrana tsy refesi-mandidy “Lamina vaovao” teo ambany fitondran'ny filoha teo aloha Suharto  fa tsy ara-dalàna ny fampiasana ny fiteny sy ny tarehintsoratra Shinoa. Noho izany, tsy mbola nankalazaina mihitsy ny Imlek (Taombaovao Shinoa). Tamin'izany fotoana izany, niteraka fiantraikany goavana ny fanitsakitsahana ny fitsipiky ny fitondrana: fonja na “fanjavonana tsinahy”.
Noho ny Filoha Wahid  tamin'ny taona 2000, nofoanany ny fanavakavahana natao tamin'ireo Shinoa sy ireo vitsy an'isa tamin'ny ankapobeny, afaka maneho ny kolontsainy amin'izao fotoana izao ny Shinoa any Indonezia. Nanambara ny Taombaovao Shinoa ho andro tsy fiasana ny Filoha Wahid, izay nodimbiasan'ny Filoha amin'izao fotoana izao Megawati Soekarnoputri . Ankehitriny, afaka mankafy io andro fialantsasatra io avokoa ny Indoneziana rehetra, fa tsy ny Shinoa any Indonezia ihany.
Novinavinaina ho 1,2 tapitrisa ny mponina Shinoa tany Indonezia nandritra ny fanisam-bahoaka natao tamin'ny foko Indoneziana farany tany Indonezia tamin'ny taona 2000. Nahita tarehimarika betsaka kokoa noho izany ny manam-pahaizana hafa (hatramin'ny 3 tapitrisa) satria nihamaro hatrany ny fanambadiana mifangaro hita teo amin'ny Shinoa sy ireo foko hafa tany Indonezia. Noho izany, ny fitambaran'ny isan'ny mponina Shinoa any Indoneziana raha oharina amin'ny isan'ny mponina amin'ny ankapobeny ao amin'ny firenena dia eo ho eo amin'ny 1-2 isan-jato eo tamin'izany fotoana (2009), ary izany no mahatonga azy ho ao anisan'ireo foko folo lehibe indrindra any Indonezia (misy foko miisa 300 mahery sy fiteny ary fitenim-paritra miisa 700 mahery ao amin'ny firenena).
Nahatonga an'i Indonezia ho toeram-pitsidihana voalohany hankafizana fankalazana ny Taombaovaon'ny volana ny fisian'ny Shinoa Indoneziana maro. Maro ny hetsika sy ny fanaingona tanana no hita eny an-dalambe, eny amin'ny toeram-pivarotana lehibe, ny magazay lehibe sy eny amin'ny toeram-pialamboly hafa. Mafana indrindra ny rivotra iainana any amin'ny faritra”China town”, ary hita ihany koa izany ankehitriny any amin'ny ankamaroan'ny tanàndehibe any Indonezia, toy ny any Medan (faritany avaratr'i Sumatra), any Jakarta sy Semarang (Faritany afovoany any Java ).
Na izany aza, manohy milaza ampahibemaso ny vondrona ara-pivavahana hiringiriny fa voarara ho an'ny Miozolomana ny mifampiarahaba “Imlek sambatra“, indrindra moa fa ny mandray anjara amin'ity fankalazana ity. Nandefa ity hafatra ity ihany koa izy ireo nandritra ny Noely Kristianina. Ho an'izany vondrona izany, Mohd Yusri Hafiz Yusof  , mpianatra Maleziana avy ao amin'ny Oniversite Islamika Akademi Pengajian ao Malezia, any Kuala Lumpur, namaly hoe:
…Di Negara China, terdapat lebih 100 juta umat Islam dan mereka merayakan Tahun Baru Cina… Allah s.w.t tidak melarang umat Islam berbaik, berbuat baik, bergaul secara baik dan berlaku adil serta jujur dengan golongan lain, baik Yahudi atau Nasrani…
Ao Shina, misy ny Miozolomana maherin'ny 100 tapitrisa ary mankalaza ny Taombaovao Shinoa izy ireo… tsy mandràra ny Miozolomana ho tsara fanahy, hanao zavatra tsara, hifanaraka tsara amin'ny hafa, ho marina sy mahitsy amin'ny finoana hafa, anisan'izany ny Jiosy sy ny kristianina ilay Andriamanitra Mahery Indrindra … “
Noho izany, arahabaina isika rehetra nahatratra ny taombaovao Shinoa , indrindra ho an'ireo Shinoa any Indonezia!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/02/13/114885/
 Filoha Wahid: http://gusdur.net/english/index.php
 Megawati Soekarnoputri: http://fr.wikipedia.org/wiki/Megawati_Sukarnoputri
 Mohd Yusri Hafiz Yusof: http://chitchat85.blogspot.com/2009/01/sambut-chinese-new-year.html